सबैभन्दा सुविधाजनक कार्यक्रम: गीतहरूको कसरी जडान गर्न
आज हामी विधिहरू एक एकल-ट्रयाक गर्न गीतहरू जडान गर्न अनुमति विश्लेषण हुनेछ। यो सुविधा तपाईं आफ्नो संगीत फाइलहरू सम्पादन र संगीत को आफ्नो संग्रह सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। साधनहरुलाई को मद्दत वर्णन संग, तपाईं पनि उल्टो प्रक्रिया, अर्थात् ट्रयाक अलग गर्न प्रदर्शन गर्न सक्छन्। सुरू गरौं।
तुरुन्तै कि उपकरण केही फरक ढाँचाको गीतहरूको जडान गर्न अनुमति छैन उल्लेख गर्नुपर्छ। एक ज्वलन्त उदाहरण एक ट्रयाक mp3 को एक विस्तार, र अन्य बेला - वाभ। यस्तो अवस्थामा यो जो एक स्वरूप दुवै फाइलहरू रूपान्तरण गर्न सक्छौं, अतिरिक्त सफ्टवेयर प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यस्तै उपयोगिता प्रशस्त छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई समस्या उत्पन्न हुँदैन फेला। एकल फाइल मा गीतहरू जडान गर्न अर्को माध्यम वर्णन गरिनेछ।
केही साइटहरु सर्भर प्रशासक अलग उपयोगिता प्रदान गर्नुहोस्। यी पोर्टल mp3-ट्रयाक जडान गर्न मद्दत गर्छ। यी लाभ को rapidity र सजिलो समावेश गर्नुहोस्। आखिर, मात्र फाइल लागि निर्देशिका निर्दिष्ट गर्न आवश्यक र व्यवस्थापन सर्भर गीतहरू लोड गर्न एक रिमोट इन्टरफेस प्रयोग बाहिर सारा प्रक्रिया पूरा गर्न। त्यसपछि तपाईं पहिले नै संयुक्त समाप्त ट्रयाक डाउनलोड गर्न सक्छन्। तर यो विधि यसको कमियां छ। यहाँ, नियम, कुनै विशेष सेटिङ र उन्नत सेटिङ हो। यस्ता केही सुविधा एक बेफाइदा छैन हुनत। यस प्रकारको को अनलाइन सेवा निःशुल्क आफ्नो सेवा प्रदान गर्न, तर आफ्नो अवस्था र सीमितता केही वेबसाइटहरूमा गरे हुन सक्छ।
अत्यधिक विशेष उपकरण
क्षणमा, यो वर्ग मा कार्यक्रम त्यहाँ कता हो कता धेरै छन्। कुनै जटिल प्यारामिटर सेटिङहरू र प्रभाव हो। यी उपकरण अनलाइन सेवाहरू अफलाइन संस्करण हो। तर, पाठ्यक्रम, त्यहाँ एक धेरै महत्त्वपूर्ण फरक, तपाईं नेटवर्क जडान आवश्यक छैन काम गर्ने अर्थात् तथ्यलाई छ। यो इन्टरनेट पहुँच उच्च गतिको जडान को घमण्ड गर्न सक्दैन भएका ती मानिसहरूको लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। आखिर, अनलाइन सेवा सर्भर ट्रयाक डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। र उत्पादन फाइल स्मृति को राशि धेरै ठूलो हुन सक्छ। यस कारण हामी लामो समय र सम्बन्ध तोड्न छैन भन्ने आशा सबै प्रतीक्षा छ। र साना उपकरण को मद्दत दुई गीतहरू संयोजन मिनेट को एक कुरा हुन सक्छ। यस्तो कार्यक्रम उदाहरणको रूपमा सजिलो एमपी -3 योजक सक्छ। यो सम्पादक अतिरिक्त मुद्रा, तपाईं आवश्यक बस सबै छैन। साथै, विकासकर्ताहरूले उपयोगिता लागत केही फैलियो।
र अन्तमा, कार्यक्रम अन्तिम श्रेणी - एक Multifunctional सफ्टवेयर। यो नाम अन्तर्गत सुविधाहरू र कार्यहरु को एक विस्तृत श्रृंखला संग उपयोगिता हुन कल्पित छ। तिनीहरूले एउटा फाइल मा गीतहरू संयोजन गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई बाहेक, उपकरण को एक गुच्छा छन्। तिनीहरूले आवाज भोल्युम, र थप वृद्धि गर्न संक्रमण प्रभाव समायोजन गर्न मद्दत गर्छ। एकदम अक्सर सोनी फोर्ज भनिन्छ सफ्टवेयर सुझाव दिन्छौं। सायद तपाईंलाई लाग्छ कि पहिलो सम्पादक पनि गाह्रो छ। तर समय, तपाईं कार्यक्रम सबै कार्यहरु सामना गर्न सक्षम हुनेछ। र यो निर्मित पृष्ठभूमि सामाग्री, र रूसी अनुवाद संग मद्दत गर्न।
त्रुटि 629. कारण के हो?
कन्फिगर गर्न राउटर कसरी जाने?
औषधि "Laveron": प्रयोगको लागि निर्देशन
हांस बोसो भन्दा उपयोगी?
क्यालिफोर्निया र फ्लोरिडा - यो प्रायद्वीप को जलवायु तुलना गर्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो कहाँ छ?
कसरी कोर व्यापार मा आदेश बनाउने? नमूनाहरू। कोर गतिविधिहरु लागि आदेश: ल लागि नमूनाहरू
40 अस्पताल, येकाटिरिनबर्ग: डाक्टर को समीक्षा, कुरा को सूची। 40 अस्पताल, एकाटेरिनबर्ग प्राप्त कसरी?
निर्मित छत रोशनी उपयोग, भित्री सजाउनु
यी भूत, शार्क र गहिरो दुष्ट जो कोहीले तर्साउन सक्छ